Bracalente Rokugadzira Boka - Bracalente Rigadzira Boka
CORONAVIRUS (COVID-19) UPDATE (tinya apa)
Iyo Bracalente Edge™
2: Chibvumirano Kugadzira
3: Kupa Chain
4: Simbiso Yemhando
6: Kuenderera Mberi Kuvandudza
Tactical | Kudzivirira
Kugona, Midziyo & Certification
Bracalente Rokugadzira Boka
Precision Kugadzira Mhinduro YeGlobal Market
Tarisa Yedu Bracalente Nhau
Kwezvizvarwa zvinopfuura zvitatu, tanga tichipa mhinduro dzekugadzira dzevatengi vedu.
Zvikamu zvedu zvikamu zvakakosha zvinobatsira kufambisira maindasitiri kubva kuAerospace, Zvemotokari, Zvekurima uye Zvemagetsi kuenda kuindasitiri, Kurapa, Oiri & Gasi, Zvekuvaraidza uye Tactical. Musiyano wedu uri munzira yedu kune rako bhizinesi. Vanhu vedu kuwedzerwa kwechikwata chako. Isu tinoziva kugadzira nekuti isu tiri vagadziri vanovaka mhinduro kutenderedza bhizinesi rako.
Tinodaidza kuti iyo Bracalente Edge.™
Dzidza Maitiro Atinoita Isu
Yedu Bracalente Nhau
Mhedzisiro yedu yekugadzira mhinduro inodzinga vanovhiringidza misika uye vatungamiriri vehunyanzvi mumhepo, pasi uye nepakati nepakati.
Aerospace kurima Automotive Electronics zveindasitiri Medical Oiri & Gasi Recreational Tactical | Kudzivirira
Kubva pane fungidziro kusvika mukusikwa, yako chaiyo machining yezvinhu inoendeswa nenguva pamwe neepamusoro nhanho yemhando nekuvimbika.
Nemazvo CNC Turning
Nemazvo CNC hwokugaya hwakabvira
Kunyora / Kutara
Denderedzwa Fomu Zvikamu
Mhepo Gage Amplifiers
CNC Michina Kutamisirwa
Kuchera, Kugaya uye Kubaya
Deburring / Kupedza
Specialty Zvikamu Kuchenesa Midziyo
Spectrometer Metal Kuongorora
Iron Uye Kukanda
Chiedza Metal Alloys
Mapurasitiki / Synthetic
Yakasarudzika kontrakiti yekugadzira, redundancy kuronga uye timu yakatsaurirwa kwauri.
Ona maitirwo azvo
Muna 1950, Silvene Bracalente akavhura chitoro chemuchina kunze kwePhiladelphia, Pennsylvania. Zvizvarwa zvitatu gare gare, Bracalente ichiri yemhuri-uye inoshanda uye ichigadzira yakavimbika mhinduro mhinduro kumakambani pasirese.
Chikwata chedu chiratidzo chehunhu hwedu hwehunhu. Ona nei vanhu vedu vari chinhu chedu chakakosha kwazvo.
Sign up yedu Newsletter
Kwezvizvarwa zvinopfuura zvitatu, Bracalente Rokugadzira Boka ranga richipa chaiyo mhinduro mhinduro dzemusika wepasi rose. Kubva prototype kusvika mukugadzirwa, uye nenzvimbo muUS, China, Vietnam neIndia, BMG inounza mhando, pazvinhu zvenguva-zveaerospace, zvekurima, zvemotokari, zvemagetsi, maindasitiri, zvekurapa, oiri & gasi, zvekuvaraidza uye zvinehunyanzvi.
© 2022 Bracalente Rokugadzira Boka
Isu tinoshandisa makuki pane yedu webhusaiti kukupa iwe chakanyanya kukosha chiitiko nekurangarira zvaunofarira uye kudzokorora kushanya. Nekudzvanya "Ndinobvumirana", unobvuma kushandiswa kweZVESE makuki.
Zvekuita uye zvikonzero zvekuchengetedza, isu tinoshandisa Cloudflare seedu CDN network.
Kana iwe uchizadza fomu pane ino saiti, iwe uri kubvuma kubvumira Bracalente kuchengeta uye kugadzirisa iyo yega data kuburikidza neMailchimp neHubspot. Takazvipira kuchengetedza nekuremekedza zvakavanzika zvako, uye isu tinongoshandisa ruzivo rwako rwega kuitisa account yako uye kupa zvigadzirwa uye masevhisi awakumbira kwatiri. Nguva nenguva, tinoda kutaura newe nezve zvigadzirwa zvedu nemasevhisi, pamwe nezvimwe zvemukati zvingangonakidze iwe. Iwe unogona kuzvinyoresa kubva kune aya kutaurirana chero nguva.
GTranslate ndiyo plugin yatinoshandisa kududzira zviri mukati mewebhusaiti mumitauro yakasiyana. Iyo yakavakirwa paGoogle Dudziro, iyo inogona kuseta "googtrans" kuki yekurangarira mutauro wakasarudzwa.
Saiti ino inoshandisa Mafonti eGoogle kuburikidza neGoogle API. Kana font ikumbirwa nebrowser yako, yako IP kero inorekodwa neGoogle uye inoshandiswa kuongororwa.
Isu tinoshandisa sevhisi yeYouTube kugonesa vhidhiyo yemukati kutenderera pane ino saiti.
Isu tinoshandisa Google Analytics uye Webtrax kuongorora yedu traffic traffic uye kugadzira zvakanangwa kushambadza.